Ii-AirTag zingabiza i-39 yeedola kwiyunithi | Ndisuka mac
I-AirTag inokuxabisa i-39 yeedola kwiyunithi nganye
I-AirTags, isixhobo ekungekho namnye umntu osibonileyo ngaphandle kwe-Prosser….
Enye yeengxoxo esinazo kwimithombo yeendaba ezikhethekileyo imalunga nobukho okanye hayi ii-AirTags. Ezi Apple AirTag ziye zahletywa kumnatha isibini iminyaka, kodwa azange zifike ngokusemthethweni. Ukusukela 9To5Mac sibone nje amarhe avela UMax weinbach apho athi ezi Zingaxabiswa ngexabiso leedola ezingama-39.
Ukuguqula ezi $ 39 kwii-euro kunokuba nzima kuthathelwa ingqalelo okwenzekileyo kwimini encinci yePodPod, umzekelo. Kodwa kuyacaca ukuba ezi AirTags ziya kufikelela kwintengiso ngexabiso elilungelelaniswe ngokusemandleni ngaphakathi "kwemida" yeApple uqobo.
Kukwathiwa banokuba noyilo oluncinci ngokwenene incinci kuneTile Pro, ezingaphezulu okanye ezingaphantsi kwesixhobo esinye esinokusilindela kwii-AirTags. Inyani yile yokuba uyilo oluncinci luya kunceda ukuhambisa ezi AirTag naphina, enyanisweni yile nto ziyiyo, ukuziphatha zifihlwe kwizitshixo, ubhaka, isipaji, njl.
Eyona nto intle kwezi AirTags kukuba ngokutsho kwinto ethethwa kwiingxelo ezahlukeneyo Banokusebenzisa nasiphi na isixhobo esisebenzayo se-Apple Bluetooth ukunika indawo yabo ngomzuzwana, nxibelelana ngqo nokwenza umsebenzi wendawo. Konke oku kulungile ngokwenene kodwa sibonile nakwikhowudi ye-iOS kwaye ayizange iphinde yaziwe, oko kukuthi, bayimveliso evela kumahemuhemu ixesha elide kwaye ukufika kwayo akuqinisekiswanga nje. Kuya kufuneka silinde ixesha elide ukubona ukuba kwenzeka ntoni kubo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Amahemuhemu » I-AirTag inokuxabisa i-39 yeedola kwiyunithi nganye
Ngaba iApple ibukela imidlalo egqithileyo? IBloomberg ithi ewe
I-WatchOS 7.3.3 ikhutshwe nje ngeziqwengana zokhuseleko